Bixinta Cuntada Medicare-Barnaamijka Bixinta Cunnada ee leh Medicare & Medicaid
Dhammaan wixii ku saabsan Medicare iyo Medicaid ee gaarsiinta cuntada
Gudaha Minnesota, dadka waaweyn iyo dadka naafada ah ee naafada ah waxay xaq u yeelan karaan cunnooyinka la kabo iyada oo loo marayo daryeelka caafimaadka gaarsiinta cuntada ee daawada barnaamijyada. Hoostiisa Wavier waayeel iyo Barnaamijka Beddelka Daryeelka (AC), tusaale ahaan, dadka qaata 65 sano iyo ka weyn waxay heli karaan maalgelin loogu talagalay adeegyada guriga iyo bulshada (HCBS) si looga caawiyo inay taageeraan inta ay ku nool yihiin guriga ama goob beel (sida ay sheegtay Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Minnesota). ).
Yaa U Qalma Bixinta Cuntada Guriga
Si aad ugu qalanto cuntada la geeyo guriga, Shakhsi wuxuu u baahan doonaa inuu ku hoos dhaco mid ka mid ah barnaamijyada tanaasulka / AC soo socda: Dhaawaca Maskaxda (BI), Daryeelka Beddelka Bulshada (CAC), Helitaanka Bulshada ee Naafonimada (CADI), iyo Naafada Koritaanka (DD).
Shuruudaha dheeraadka ah ee loogu talagalay cuntada keenista guryaha waxaa ka mid ah:
Qofka helaya waa inuu ahaadaa 18 sano ama ka weyn
Qofka helaya waa inuusan awoodin inuu diyaariyo cunnadiisa / keeda
Qofka qaataha ah wuxuu adeegsanayaa habka ugu kharashka badan ee waxtar u leh hubinta nafaqada isku dheelitiran
Qofka qaata ma haysto qof kale oo cuntada diyaarsada
Sida la xusay, shaqsi sidoo kale wuu u qalmi karaa haddii isagu / iyadu ay hoos timaado barnaamijyada EW iyo AC. Shuruudaha dheeraadka ah ee u-qalmitaanka ee hoos yimaada EW iyo AC waxaa ka mid ah:
Qofka helaya waa inuu jiraa 18 ama ka weyn
Wax Xaddidaad Ah Ma Leedahay?
Qofka qaata adeegga cuntada ee ka mid ah ilaha kale ee maalgelinta, sida daryeelka korinta ama kaalmada guriyeynta, xaq uma yeelan doono in la siiyo gaarsiinta cuntada ee daawada. Wixii macluumaad ah ee ku saabsan tilmaamaha iyo xaddidaadaha kale, booqo Waaxda Shaqaalaha ee Minnesota degel
Sida loo Helo Ka-dhaafitaannada Medicare / Medicaid ee Bixinta Cuntada Guriga
In laga bilaabo helitaanka raashinka guriga laga keenayo Cuntada Lugaha, adeeg bixiyahaagu wuxuu u baahan doonaa inuu dhammaystiro talaabooyinka soo socda:
Si aad lacag uga hesho Barnaamijyada Daryeelka Caafimaadka ee Minnesota (MHCP), adeeg bixiyahaagu waa inuu:
Isku qor sidii adeeg bixiye MHCP
Bixiso ruqsad siinta ama dukumintiga saxda ah ee taageeraya aqoontiisa / keeda si ay u bixiso adeegyo ka-dhaafitaan, sida gaarsiinta cuntada guriga
Hesho ruqsad adeeg DHS ansixisay si ay u bixiso adeegyo xubinta MHCP
Bixiyahaagu sidoo kale wuxuu u baahan doonaa inuu iska diiwaangaliyo koontada MN-ITS.
Bil kasta, adeeg bixiyahaagu wuxuu ubaahan doonaa inuu xaqiijiyo u qalmida barnaamijka xubin kasta oo heleysa cunno gaarsiinta guriga inkasta oo taleefan ama xaqiijinta xaq u yeelashada MN-ITS.
Miyuu Cunnooyinka Taayirada Lagu Daboolaa Medicare / Medicaid?
Hubinta inaad hesho cunnooyin cusub oo nafaqo leh oo si toos ah loogu geeyo gurigaaga waa himiladeenna.
Su'aalaha ku saabsan xaq u yeelashadaada cuntada guriga la geeyo, nala soo xiriir (612) 623-3363 ama email noogu soo dir [email protected] Wada tashigu marwalba waa bilaash waxaana la heli karaa Isniinta-Jimcaha saacadaha 8:30 am-5:00 pm.